Isilawuli sethempelesha, i-thermometer ye-elekthronikhi, ibhokisi lokulawula ngogesi - iSanhe
Mayelana neProfire Energy
I-Xuzhou Sanhe Automatic Control Equipment Co., Ltd. yasungulwa ngo-Septhemba 2009. Ibhizinisi layo eliyinhloko ukuthuthukisa nokwakha izilawuli ze-microcomputer kanye nomswakama, imitshina yokuvuza kwe-halogen, izinga lokushisa nomswakama amamitha wokubonisa edijithali namakhabethe wokulawula ukubanda, kanye ne-PLC ebandayo lawula amakhabethe.
Indawo ekhona yenkampani ingamamitha-skwele angama-2600, imigqa ekhiqizwayo engu-7, enezilawuli ze-microcomputer kanye nezilawuli zomswakama, imitshina yokuvuza kwe-halogen, izinga lokushisa nomswakama amamitha wokubonisa edijithali, amakhabethe wokulawula ukubanda, amakhabethe wokugcina amakhaza we-PLC, njll. Imikhiqizo engama-70 ochungechungeni. Umthamo wokukhiqiza nowenhlangano ungaphezu kwamasethi angama-250,000, anezinto ezikhethekile zokukhiqiza nokuhlola, nokusekela amazinga ajwayelekile wokuhlola nokuhlola. I-Engineering Research Centre inezinsiza (amasethi) zokuhlola ezingaphezu kwama-20, inkundla yokuhlola nendawo yokukhiqiza engama-280 square metres. Le nkampani iyunithi lesitifiketi sokuphathwa kwekhwalithi ye-GB / T19001-2016 / ISO9001: 2015. Imikhiqizo eminingi isidlulile isitifiketi se-CE, ngaphandle kokuthengisa. Inezindawo zokuthengisa nezinsizakalo emadolobheni amaningi nasezifundeni ezweni lonke, futhi iyinani lamabhizinisi asekhaya aziwayo ahlinzeka ngezinsizakalo ezisekelayo.
Uyini umkhuba wezimboni mater eluhlaza ...
Lokhu kukhuphuka kuveza izici ezintathu Ezithintwe ubhadane lwango-2020, kusukela engxenyeni yesibili yonyaka, izinto ezahlukahlukene zezimboni eziluhlaza nezisizayo zikhombise ukuthambekela okuphezulu okuphezulu, futhi ...
Isimiso ukusebenza t electronic ...
I-thermometer ye-thermoelectric isebenzisa i-thermocouple njengesici sokulinganisa izinga lokushisa ukukala amandla we-thermoelectromotive ahambelana nethempelesha kanye nenani lokushisa likhishwa ...
IFOMU LOKUXHUMANA NOMBUZO
isilawuli sokushisa se-thermostat, ukulawulwa kokushisa okuzenzakalelayo, isilawuli sokushisa se-incubator, isilawuli se-digital thermostat, i-aquarium thermometer yedijithali, i-thermometer yedijithali,